बजाजको नयाँ शोरुम अब फिदिममा – Maitri News
बजाजको नयाँ शोरुम अब फिदिममा
काठमाडौं । नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले फिदिममा पूर्ण सुविधा सम्पन्न नयाँ शोरुम “समृद्धि एण्ड ब्रदर्स प्रा. लि” को उद्घाटन गरेको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा अधिक बिक्री हुने र विश्वाशीलो अटो मोबाइल ब्राण्ड बजाजले अझ बढि सुविधा सम्पन्न बजाज सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स देशभर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले फिदिममा पनि शोरुम संचालनमा ल्याएको छ । यस उद्देश्यलाई सार्थक बनाउन “समृद्धि एण्ड ब्रदर्स प्रा. लि फिदिमका प्रोपराइटर संजिव जोशीलाई डिलरसीप प्रदान गरिएको छ ।
नयाँ शोरुम शुभारम्भ गर्दै हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.का जनरल म्यानेजर योगेन गुरुङले भन्नु भयो, “हामी फिदिममा नयाँ शोरुम उद्घाटन गर्न पाउँदा निकै प्रसन्न छौं । हाम्रा ग्राहकहरु निरन्तर वृद्धि भइरहनु भएको छ र उहाँहरुलाई पूर्ण सन्तुष्टि र सुविधा प्रदान गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । फिदिममा यो नयाँ शोरुम विस्तारसँगै, हामीले आशा गरेका छौँ कि यसले ग्राहकहरुको जीवन सहज बनाउनुका साथै उनीहरुले बजाज मोटरसाइकलको नयाँ अनुभव बटुल्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।”
Previous Previous post: ग्लोबल आइएमई बैंकले रोल्पामा दुई नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको सुरुवात
Next Next post: अमेरिकाको तीन स्थानमा आक्रमण : छ एशियाली महिलासहित आठ जना मारिए